စကော်ပီယံဂိုဏ်း ( Scropion Gang ) လွတ်လာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စကော်ပီယံဂိုဏ်း ( Scropion Gang ) လွတ်လာပြီ
စကော်ပီယံဂိုဏ်း ( Scropion Gang ) လွတ်လာပြီ
Posted by ရာဇ၀င်လူဆိုး on Aug 20, 2011 in Myanma News | 19 comments
လွန်ခဲ.တဲ. ၁၅ နှစ်လောက် ကျုပ်တောကနေ ရန်ကုန်ရောက်ကာစက ရန်ကုန်မှာ ခေတ်စားနေတဲ. စကော်ပီယံဂိုဏ်း (Scorpion Gang) က အဲဒီအချိန်ကတော. တော်တော်ကို လူရှိန်ခဲကြတာ။ ကျူပ်တ.ိုတောင် အားကျခဲ.သေးတယ် ..ဟီဟီး။ ဘာသိမလဲဗျ လူငယ်တွေဆိုတော. မိုက်ရူး၇ဲလုပ်ချင်ခဲ.သေးတာ။ သူတို.ဂိုဏ်းရဲ.အမာခံ တွေက အစိုးရ အရာရှိကြီးတွေ၊ သူဌေး သူကြွယ်နှင့် မြို့မျက်နှာဖုံးတွေရဲ. သားသမီးများက စတင် စုဖွဲ့ခဲ့ကြပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းကို လူသိ များလာသည်။( ဟိုဗျာ ဂျက်ကီချန်းကားထဲကလို ရဲမူးသား လူမိုက်လေးတွေလိုမျိုးပေါ.)။ အခု ဂိုဏ်းထဲက ၁၅ ယောက် ၁၀ နှစ်ကျော်ထောင်ကျတာကနေပြန်လွတ်လာကြပြီလို.ကြားပါတယ်။ အခု စကော်ပီယံဂိုဏ်းသား ၁၅ ဦး ပြန်လွတ်လာပြီး ၅ ဦးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ဆက်လက် အကျဉ်းကျနေတုန်ဲး ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖမ်း ခံရသည့် စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးအနက် ၂ ဦးသည် ထောင်ကျနေစဉ် အတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အရင်ကတော. ဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်..နဲနဲမိုက်ကြေးခွဲ..ဒုစရိုက်မှု အသေးစားတွေပဲလုပ်ပေမယ်. နောက်ပိုင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး နဲတစ်ခြား အကြီးကြီးတွေပါလုပ်လာကြတယ်။ အဓိက သူတို.ညှိတာက အစိုး၇ထဲက လူတစ်ယောက်နဲ.စညှိတာကနေ ဖြိုခွဲခံလိုက်ရတယ်ပြောတယ်။
ကျနော်တွေးမိတာက လူငယ်တွေ ဒီလိုမိုက်ရူးရဲတွေလုပ်နေမယ်အစား တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ထောင်.တနေရာက ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာရင်ဖြင်. ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲဗျာ ။ ဒါပေမယ် ကျနော်မျက်စိရှေ.မှာ တွေနေ၇တာက မိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ. လူမိုက်တွေ ဆန္ဒပြရင် ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ရတော.မယ်ဆိုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကြတာပဲ ။ ဘယ်သူ.ကိုမှမကြောက်ပေမယ်. စွမ်းအားရှင်ကိုတော. သူတို. ကြောက်ကြပုံပဲ။ ကဲ ထားပါတော. စကော်ပီယံဂိုဏ်း အကြောင်းကို ကျုပ်သိသလောက်လေးဝင်ပြောတာပါ။ ကျုပ်ထက်ပိုသိတဲ. သူများ ဗဟုသုတ အဖြစ် ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါ။ နောက် လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် လဲ ရှိသေးတယ်။ သူလဲ နာမည်ကြီးထဲမှာပါတယ် နော။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတာ အရင်ခေတ် တုန်းက နာမည်ကြီး တစ်ယောက် မလား ဗျ ။
“ရာဇဝင် လူဆိုး” ဆိုတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကိုယ်တိုင် ဝင်ရေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ နော်….
ကျွန်တော့် အမြင် စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းသာ
အရင် လို လုပ်ဦးမယ် ဆိုရင်
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ဟိုတစ်လောတုန်းက ဆုံးသွားပါပြီ …
ရာဇ၀င်လူဆိုးက လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ရွာထဲမ၀င်ရဲတော့ဘူး ..
(လူမိုက်တွေ ဆန္ဒပြရင် ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ရတော.မယ်ဆိုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကြတာပဲ ။ )
စာထဲမှာကိုကပါပြီးသွားပြီလေ။ မိုက်ပါတယ်ဆိုမှ တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ သူတို့ ရဲ့ ဗီဇ ပေါ်လာတော့တာဘဲ။ မိုက်တယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိ နောင်ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်ကို မတွေးတောဘဲ အရူးချီးပန်းလျှောက်လုပ်တာကိုခေါ်တာ။ အခုထောင်ထဲဝင်ရတဲ့သူတွေကို (ဦးဦး) ဇာဂနာ ရဲ့ အီးတလုံးရှူခိုင်းဖို့ တောင်မတန်ဘူး။
ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးအပိတ်ခံရတာသူတို့ ကြောင့်ပဲဆို (ကြားမိတာပြောတာ)။
ဆန်ကုန်မြေလေး ဆိုတာကို ငယ်ငယ်တုံးကသဘောသိပ်မပေါက်သလောက် ၊ အခုဒီလိုလူမျိုးတွေတွေ့ ရတော့မှ ၊ အော် ဒီလိုလူတွေကို လူကြီးတွေက တွေ့ လို့ဒီလိုစကားမျိုးတွေ ပေါ်လာပါလားလို့သဘောပေါက်တော့တယ်။
လွတ်လာတာက စကော်ပီယံ ဂိုဏ်း…. ရေးတာရာဇဝင် လူဆိုး
စကော်ပီယံဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင် ကျော်နေဝင်းကရော ပြန်လွတ်လာ လား?
သိတာက …………လူမိုက် တရာရုပ်ရှင် ပဲ ….. http://www.shweo.com/node/77
Scropion ခေါင်းဆောင်က ကျော်နေ၀င်းမဟုတ်ပါ ကိုရန်နိုင်(ခ) ရန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်တဲ့ထဲမှာ သူမပါသေးပါဘူး။ သူအားကိုးရတဲ့ ငထက်ရယ် ကိုတိုးရယ်ကတော့ လွတ်လာပါပြီ။ မုန်တိုင်းခေါင်းဆောင် ဂျွန်ဂျွန်လဲ ပါပါတယ်
ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က ကိုရန်နိုင် ဆိုလားပဲဗျ။ ကျနော်ကြားမိသလောက်။ ကျော်နေ၀င်းတို. ဇွဲနေ၀င်းတို.လဲ ပတ်သက်နေတယ် ဒီအဖွဲ.က။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင်.ပိတ်တာကတော. သူတို.ကြောင်.အများဆုံးပါတယ်။ ဟိုအရင်ကတော. ညနက်ပြီဆိုရင် သူတို.တွေနဲ.တိုးမှာလန်.နေရတယ်၊။ ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်နယ်တစ်ချို.မှာလဲ ဒီလို လမ်းသရဲလိုလို ဘာဂိုဏ်း ညာဂိုဏ်းတွေ အပေါသား။ (လူကြီးသားသမီးတွေပေါဗျာ) ညဘက်တွေ တွေ.ရင် ဆိုင်ကယ်တွေနဲ. ဖြတ်ရိုက်သွားကြတာ။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေတောင် ခံကြရတယ်။ ထူးဆန်းတာက အဲဒီအဖွဲ.ထဲမှာ အနေအစားချောင်လိုက်နေတဲ. မြန်မာတွေတောင် တစ်ချို.ပါတယ်ဗျ။ ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်း မစောက်ရှောက်တဲ.အပြင် နိုင်ရာစားလုပ်ချင်နေကြသေးတယ်။ စကားမစပ် ကျူပ် ရာဇ၀င်လူဆိုးဖြစ်နေရတဲ.အကြောင်း၇င်းတွေက ၁။ လမိုက်ည သန်ခေါင် မီးပြတ်ချိန်မှာ ဖားပြုတ်ကို အုတ်ခဲနဲ.ထုတဲ.အမှု၊ ၂။ တီကောင်တစ်ကောင်ကို ငှက်ကြီးတောင်နဲ. ၃ ပိုင်းပိုင်း သတ်ခဲ.လို.ဗျ။ ဟိုးအရင်ကတော. အင်းစိန်ထောင်ထဲကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်ပေါ.ဗျာ မယုံမရှိနဲ. ( ထောင်ဝါဒါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ထောင်ဝန်းထဲမှာ ဘောလုံးသွားကန်တာပါ..ဟဲဟဲ)
ဧရာဝတီဆိုဒ်က ထပ်ရလာတဲ. သတင်းပါ….ပိုပြည်စုံအောင်လို. ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…..။
စကော်ပီယံဂိုဏ်းကို ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းကာလတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရ အရာရှိကြီးများ၊ သူဌေး သူကြွယ်နှင့် မြို့မျက်နှာဖုံး သားသမီးများက စတင် စုဖွဲ့ခဲ့ကြပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းကို လူသိ များလာသည်။ ၎င်းတို့ကို အားကျသည့် လူငယ်များ ရှိသကဲ့သို့ လူ့ဘော်ကြော့များ အဖြစ် ဝေဖန်သူများလည်း ရှိခဲ့သည်။
အဆက်အသွယ် ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဂိုဏ်းအတွင်း စည်းလုံးမှုရှိခြင်းနှင့် သြဇာ အာဏာရှိသည့် လူကြီး သားသမီးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရဲ စသည့် အာဏာပိုင်များက အရေးမယူရဲခဲ့ကြပေ။
၁၉၉၀ ဝန်ကျင်နှစ်များက နအဖ စစ်အစိုးရ၏ စစ်ထောက်လှမ်းရေးပြီးလျှင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းကို ရန်ကုန်မြို့တွင် အကြောက်ရဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့ ဂိုဏ်းဝင်များ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် သွားလာနေပါက လမ်းဆုံ မီးပွိုင့်များတွင်ပင် ယာဉ်ထိန်းရဲများ မီးနီကို မီးစိမ်း ပြောင်းပေးရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယာကူဇာဂိုဏ်းဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသော ယင်း စကော်ပီယံဂိုဏ်းသည် အစပိုင်းတွင် ဆိုးသွမ်းခြင်းနှင့် ပြစ်မှု အသေး အဖွဲများကိုသာ ကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကားမှောင်ခိုမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်ဝယ်မှုများ သာမက လူပြန်ပေးဆွဲမှု များအထိ အတင့်ရဲစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းသည် မူးယစ်ဆေး အထိုးလွန်ပြီး သေဆုံးသွားသည့် သားလိမ္မာ ဆိုသူ၏ အလောင်းကို သူ၏ အိမ်ရှေ့တွင် သွားရောက် ပစ်ထားရာမှ သတင်းဆိုး ပိုမိုထွက်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းဝင်များနှင့် ပတ်သက်နေသည့် သားလိမ္မာ ဆိုသူကို စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းဝင်များက သတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းဝင် တဦးက နအဖ စစ်အစိုးရ နံပတ် ၂ ခေါင်းဆောင် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၏ သမီးဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်မှုကြောင့် ပြဿနာများ စတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ကောလာဟလများ ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် စကော်ပီယံဂိုဏ်းဝင်များ ဆိုင်ကယ် အမောင်းပြိုင်ရာမှ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၏ ယာဉ်တန်းနှင့် ဆုံမိရာမှ သေနတ်နှင့် ပစ်သည့် အမှုအရာ ပြုလုပ်ပြ အပြီးတွင် စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းကို ဖြိုခွင်းရန် အာဏာပိုင်များက စတင် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဂိုဏ်းဝင်တချို့ ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့သော်လည်း ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် အပါအဝင် ၂၂ ဦး အဖမ်းခံရပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းဝင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ရန်ကုန်မြို့ခံ အချို့လည်း အရေးယူ ခံရပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း တရားဝင် ပိတ်ပင်ခံရသည်။
စကော်ပီယံဂိုဏ်း ဖြိုခွင်းခံရပြီး လအနည်းငယ် အကြာတွင် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ မြေးများဖြစ်သော ကျော်နေဝင်း၊ ဇွဲနေဝင်း၊ အေးနေဝင်းနှင့် သားမက်ဖြစ်သူ အေးဇော်ဝင်းတို့ နိ်ုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု စသည့် ပုဒ်မများဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခံရသည်။ ဦးနေဝင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူတို့ပါ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချခံခဲ့ရသည်။
ဦးနေဝင်း၏ မြေးများသည် စကော်ပီယံဂိုဏ်းဝင်များနှင့် ရင်းနှီးသော်လည်း ဂိုဏ်းနှင့် တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ တချို့က ဆိုသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းကျနေသော စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းသားများသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ရိုက်နှက်ကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) က သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သေးသည်။
ယခု စကော်ပီယံဂိုဏ်းသား ၁၅ ဦး ပြန်လွတ်လာပြီး ၅ ဦးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ဆက်လက် အကျဉ်းကျဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖမ်း ခံရသည့် စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးအနက် ၂ ဦးသည် ထောင်ကျနေစဉ် အတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မကြာပါဘူး.. မြန်မာပြည်မှာ..အဲဒီလိုဂိုဏ်းတွေ.. အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်..။
လူထုကတော့.. တော်တော့်ကို.. ဒုက္ခတွေရောက်ဦးမှာပေါ့..။
အဲဒီလိုနဲ့.. နောက်..အနှစ်၂-၃ဆယ်လောက်ဆိုရင်တော့.. တရားဥပဒေစိုးမိုးတာက..ပြန်အသာရလာမယ်ထင်ပါတယ်..။
Really Ko Kai ? I also want to do that …ဟဲဟဲ။ ကျူပ်သိခဲ.ဖူးတာတစ်ခုက ” ဂိုဏ်းဂဏလို စုစည်းခြင်းဟာ ပြိုကွဲခြင်းရဲ.အစ” ပဲတဲ.ဗျ။ ကြည့်လေဗျ..ပြည်းတွင်းအတိုက်အခံ ပါတီတွေကအစ အကွဲကွဲ အပြဲပြဲနဲ. ငါမြင်း ငါစိုင်းနေကြတာ။ စုဖွဲ.ခြင်းဟာ အကောင်းဘက်ကကြည်.၇င်တော. ညီညွတ်ကြရင် သိပ်အကျိုး၇ှိသလောက် ပြီး၇င်အုပ်စုထဲမှာပဲ အင်အားချိန်ခွင်ရှာညှိကြ နဲ. မထိန်းနိုင်ရင် ပြိုကွဲခြင်းဘက်ကို ဦးတည်သွားရော..။
သူကြီး (ကိုင်း)ဂိုဏ်းထောင်ပြီး….(ကို) ငှက်ကြီး နှင့် (ကို)ကြောင်ကြီ်း ကိုဖမ်း ဦးမှာပေါ့ ..။
ဟာ ဒီကောင်တွေလွှတ်လာပီဆိုရင်လဲ မြွေ အစွယ်ကျိုးသလိုကျိုးသွားလောက်ပါပီ။သူ့ ခေတ်ကုန်သွားပါပီ။နေရွှေသွေးအောင်ခေတ်ဖြစ်နေပီ။သူတို့ ဂိုဏ်းပြန်ဖွဲ့ မယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ အချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ တော့မှာ ပူစရာကိုမလိုတော့ဘူး။
အရင်က သူတို့ဂိုဏ်းသားတွေ ဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ခဏခဏထိုင်တယ်ဆိုပဲ
captain ရေ….စတာသိပါတယ်ဗျ၊ ဒီရွာမှာ ဒီလိုပဲ အားလုံးက မမြင်မတွေ.ဘူးပေမယ်. တစ်ချို.ဆို ငယ်ပေါင်းတွေလို ရင်းရင်းကြီး ပေါင်းကြတာ။ ။ ကျုပ်ငယ်ငယ်က ဆိုးခဲ.တာတွေ၇ှိပေမယ်. အခုအသက်တွေကြီးလာတော. လူငယ်တွေကို ( ကျနော်တို.မျိုးဆက်..နောင်တစ်ချိန်တိုင်းပြည်ခေါင်းတောင်တွေပေါ.နော) ကျုပ်သိခဲ.တဲ.အတွေးအခေါ်တစ်ချို.ကို ပေးချင်တယ်။ ကျုပ်ဆရာကြီးတစ်ဆူမဟုတ်တော. ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိ မပြောတတ် မသင်တတ်ဖြစ်နေတာပါ။ တာဝန်မကျေသလို ကျုပ် တစ်ခါတစ်လေ ခံစားမိတယ်။
မဆိုစလောက်လေးရနေဘီလို.ထင်တာပဲ :-) :-) :-)
သဂျီးက ဂိုဏ်းထောင်ပြီး ဘာလုပ်မလို့လဲ..
လူမှောင်ခို ကူးမလို့လား ဘိန်းဖြူ ဖြန့်မလို့လား..
ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီ ဂိုဏ်းချုပ် လုပ်ထားတာ လူမသိလို့ လူတွေ သိအောင် လုပ်မလို့လား။
it too stupid
scorpion gang ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ရန်နိုင် က ဘယ်သူ့သားလဲ ? အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ? ဘယ်ကျောင်းထွက်လဲ ? သိတဲ့သူ လက်ညှိုးထောင် !